Qarax Weyn Oo Gil-gilay Barxada Dhismaha Baarlamaanka Oo Shir Ka Socday | Araweelo News Network (Archive) -
Qarax Weyn Oo Gil-gilay Barxada Dhismaha Baarlamaanka Oo Shir Ka Socday
Muqdisho(ANN)Qarax weyn ayaa ka dhacay albaabka hore ee dhismaha xarunta Baarlamaanka Somalia, iyadoo ay mudanayaashu maanta ku lahaayeen xaruntaa oo u dhow Masjidka isbahaysiga ee Muqdisho. wararka hordhaca ah ee
ka soo baxey khasaaraha ka dhashay qaraxaa oo ahaa gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku qarxay halkaa.
Qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa laga maqlayey guud ahaan magaalada Muqdisho oo ka dhacay barxadaa oo xildhibaanadu ay gaadiidka dhigtaan, waxaana wararku intaa ku darayaan in gaadhiga qarxay lagu dhex qariyey gaadiidka goobta yaalay.
Wararka hordhaca ah ee kasoo baxaya qaraxaa ayaa sheegaya in ilaa hadda la arkay dhimashada labo qof oo midkood oo ku dhex jiray mid ka mid ah gaadiidka goobta yaalay, iyadoo qofka kalena uu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowlada oo ilaalo ka ahaa goobtaa. sidoo kale waxa dhaawac kasoo gaadhay afar qof oo shacab ah ilaa inta la ogyahay.
“Markii kulankii Baarlamaanku soo dhamaaday ayaa xildhibaanadu ka soo baxeen gudaha xarunta golaha shacabka waxaana goobtaa ka dhacay qarax aad u weyn oo ka dhashay gaadhi ku dhex jiray gaadiidka xildhibaanada”sidaa waxaa yidhi weriye ku sugnaa xarunta golaha shacabka.
Qaraxa ayaa burburiyey gaadiid badan oo goobta yaalay, kuwaas oo qaarkood ay wada gubteen kuwo kalena uu soo gaadhay burbur, ciidamada AMISOM, ayaa wararku sheegayaan in gudoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa ay ka kexeeyeen goobta markii qaraxu dhacay, balse ay xildhibaanadu si nabadgelyo ah uga bexeen goobtaa.